Garsoorka kubadda cagta Soomaaliya oo bilaabay isticmaalka Aaladda GPS-ka..+ Sawirro – Gool FM
(Muqdisho)16 Abriil 2019. Garsoorka kubadda cagta Soomaaliyeed oo uu todobaadkan tababar aqoon kororsi uga socdo magaalada Muqdisho ayaa maanta garoonka Banaadir looga qaaday tijaabooyinka orodka qaybahiisa kale duwan iyagoo adeegsanaya aaladda lagu ogaado heerka tababarka iyo fayoqabka garsoorka (On the Devices Monitoring Physical Fitness Performance) (GPS)
Aaladdan oo sanadkan laga dhaqan geliyay wadammada qaaradda Afrika ayaa loogu talo galay cayaartoyda iyo garsoorka si loo agaado qaybaha ay ku wanaagsan yihiin iyo qaybaha ay ku liitaan mudada tababarka uu socdo, waxaana maanta isticmaalay garsoorayaasha heerarka kale duwan ee tababarkan loo soo xulay.
Guddoomiyaha Guddiga Garsoorka Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Xasan Aadan Xaaji Yabaraow (Wiish) ayaa warbaahinta u sheegay in talaabo kale oo muhiim ah uu garsoorka Soomaaliyeed u qaaday dhanka Horumarka.
“Waxaan haysanaa garsoor lagu aamino kulammada heer qaran iyo heer koox ee ka dhaca qaaradda Afrika ammaana ku mutaysta, sidaa awgeed ka guddi ahaan inagoo kaashanayna madaxda xiriirka waxaa innaga go’an inaan garsoorkeennna ka horumarino dhanka aqoonta, kana hagab tirno agabka muhiimka u ah si ay ula jaanqaadaan dhiggooda qaaradda” ayuu Guddoomiye Wiish sii raaciyay hadalkiisa.
Tababarka garsoorka oo ay sidoo kale wax ka bixinayaan Macallin Maxamed Cabdulle Fare Yare oo ah macallin darajada heerka koowaad ee macallinimo ee CAF haysta iyo Madaxa Fayo-qabka Xiriirka Kubadda Cagta Cabdi Cabdulle Baasaale oo tababar la xiriira isticmaalka aaladdan ku soo qaatay dalka Koofur Afrika ayaa ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan, iyadoo garsoorka laga dareemay in ay diyaargarow wanaagsan usoo galeen tababarkan.
Soomaaliya ayaa noqotay wadankii sideedaad ee dhaqan galiya istcimaalka aaladan oo loo ogolaaday 54 dal ee qaaradda Afrika, waxayna taasi muujinaysa sida uu garsoorka kubadda cagta Soomaaliya dhanka kasta uga dadaalayo.
"Hal shillin oo aan bixinaynaa ma jirto" – Waxaa sidaas sheegtay kooxda Cardiff kaddib Geeridii ku timid Emiliano Sala